03 / 06 / 2021 03 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 609 Views စာ0မှတ်ချက် 75300 မှာ Imperial လည်စည်းတိုက်လေယာဉ်, 75301 လုကာ Skywalker ရဲ့ X-Wing တိုက်လေယာဉ်, 9525 Pre Vizsla ၏ Mandalorian တိုက်လေယာဉ်, ဘိုကာတန်, Boba fett, Disney+, Gar Saxon, Kate Sackhoff, Lego, Lego Star Wars, ငါကျွန်, Star Wars, Star Wars သူပုန်များ, Star Wars: အဆိုပါ Clone စစ်ပွဲများ, Star Warsဖြေ, Temuera Morrison, အဆိုပါ Clone Wars, အဆိုပါ Mandalorian
ဒီနွေရာသီပါပဲ Lego Star Wars အစုံလိုက်တပ်ဆင်ထားမှုများသည် Gar Saxon နှင့်နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်ထားသော Boba Fett အပါအ ၀ င် Mandalorians သုံး ဦး အားအသစ်စက်စက်ယူဆောင်လာစေလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Lego Group ၏နွေရာသီ 2021 Star Wars လှိုင်း - ထုတ်ဖော်ပြသ အစောပိုင်းကယနေ့ ဂျပန်နွေရာသီမှတဆင့် Lego catalog - Mandalorian နှင့် The Clone Wars များပေါ်တွင်အခြေခံထားသောအစုံ ၇၅၃၁၂ နှင့် ၇၅၃၁၆ အကြားရှိမန်ဒူးယဉ်ကျေးမှုအတွင်းနက်ရှိုင်းစွာတူးသည်။
ရုံဇန်နဝါရီလကဲ့သို့ 75300 မှာ Imperial လည်စည်းတိုက်လေယာဉ် နှင့် 75301 လုကာ Skywalker ရဲ့ X-wing တိုက်လေယာဉ်, 75312 သည်အထင်ကရသင်္ဘောတစ်စင်း - ဤကိစ္စတွင် Slave I ကိုယူပြီး၎င်းကို ပို၍ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်စျေးနှုန်းသို့လျှော့ချသည်။ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တကယ့်ကိုပွတ်တိုက်မှာကတော့သူ့ရဲ့အသေးစားပုံရွေးချယ်မှုပါ။
ဒီ Slave I version ကို Empire Strikes Back အပေါ်အခြေခံလိမ့်မယ်လို့ကောလာဟလတွေကန ဦး ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဒါဟာ Mandalorian ဒုတိယရာသီကမှုတ်သွင်းခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကနောက်ဆုံးမှာတော့ Boba Fett minifigure အသစ်အတွက်အချိန်ရောက်လာပြီလို့ဆိုလိုတာပါ။ အတွက် Temuera Morrison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Disney+ တီဗီရှိုး။
75316 သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၏ 2012 Pre Vizsla ၏ Mandalorian တိုက်လေယာဉ်တွင်နောက်ဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့သောသင်္ဘောကိုအသစ်စက်စက်သင်္ဘောဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဒီဗားရှင်းဟာ Bo-Katan Kryze နဲ့အငြင်းပွားနေတယ်၊ သူမသည်ယေဘူယျအားဖြင့် Mando (ခြေထောက်ပုံနှိပ်ခြင်း!) နှင့် Gar Saxon တွင်ပထမ ဦး ဆုံးသောထူးခြားသောသံခမောက်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Bo-Katan နှင့် Gar Saxon တို့မရင်းနှီးလျှင်သင်နှစ် ဦး စလုံး Clone Wars ၏ရာသီတော်တော်များများတွင်တွေ့မြင်ရပြီး၊ Disney+ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က - နှင့်မျိုးစုံဖြစ်စဉ်များ Star Wars သူပုန်တွေ။ ယခင် Mando သည် Mandalorian တွင်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုကိုကူးပြောင်းခဲ့ပြီး၊ သူမသည် Battlestar Galactica ကျောင်းသားဟောင်း Katee Sackhoff ကပြခဲ့သည်။
ဤဇာတ်ကောင်များကိုယူဆောင်လာရန် Cross-series အလားအလာများနှင့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများစွာရှိသည်မှာရှင်းနေပါသည် Lego ၂၀၂၁ တွင်တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်မင်ဒိုလာရီယန်၏ရာသီ ၂ မှအကြီးအကျယ်မှုတ်သွင်းခံထားရသောလှိုင်းတံပိုးများဘေးတွင်ထိုင်နေရခြင်းကိုသူတို့မအံ့သြသင့်ပါ။ နွေရာသီအကုန်လုံးကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် Star Wars အစုံ - ဘား Mandalorian Forge သတင်း - by ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.
← Lego Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန် 2021 အတည်ပြုခဲ့သည်
Lego Marvel 2021 ထွန်းပြက္ခဒိန်ပုံရိပ်တွေပြောက် →